Ngaba yimidiya "yeNtlalo" ngenene? | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 19, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndinezihlobo ezingama-36 Facebook, Unxibelelwano olu-122 kwi-LinkedIn, amalungu ali-178 kum MyBlogLog Uluntu, ishumi elinesibini kwi-MySpace, malunga nabahlobo abangama-60 kuYahoo! Umyalezo okhawulezileyo, ama-20 kwi-AOL Messenger ekhawulezileyo kunye nokufowunelwa kwabangama-951 UPlaxo! Ndikhona Qhekeza, MyColts.net, uJaiku, Twitter kwaye ndifunde malunga neebhloko zeetshomi (phakathi kwama-300 okanye ezinye iintlobo zokutya endikuqokelelayo kunye nokukuphonononga).
Ndineentloni ukuxelela abantu ukuba ndineeakhawunti ezintathu ze-Intanethi… hayi enye. Ifowuni yam iqhagamshelwe, ikhaya lam liqhagamshelwe, kwaye ndineakhawunti yeT-Mobile yokufikelela kwiStarbucks kunye neMida (apho ndi do ukudibana nabahlobo). Ndinayo nasemsebenzini, ewe. Ungahleka, kodwa amathuba okuba uya kufakwa kwinqanaba elifanayo kwiminyaka embalwa, nawe. Kwenzeka nje ukuba ibe ngumsebenzi wam kunye nokuzonwabisa.
Ukunikwa lonke usasazo lwentlalo endiyinxalenye yalo, ngaba ngenene ndiyile ntlalontle?
Ndithetha nabanye oochwephesha abangenzi nzuzo ngenye imini kwaye ndazama ukucacisa Ubomi be sibini ukuya ku. Zama ukucacisa uBomi beSibini ukuprinta iingcali zentengiso yemithombo yeendaba kwaye awungekhe uncede kodwa ufumane ezinye ii-chuck kunye ne-snickers. Ekugqibeleni omnye wathi:
“Ayivakali loo nto kum. Kuvakala ngathi kuyayichasa intlalo. ”
Inqaku lobuqu: Ubomi beSibini ngokuqinisekileyo linqanaba le-uber-geekdom andizami ukuyifumana. Ndinemiceli mngeni eyoneleyo ngoBomi bam bokuQala kunokusebenza kowesiBini.
Ndicinga ukuba wayefile. Oku akunontlalontle kwaphela. Intlalontle ifuna ngaphezulu kokubukela, ukufunda okanye ukumamela… kukho ukuqonda ulwimi lomzimba wabantu, umtsalane, ukubamba, ukuvumba… ukujonga nje emehlweni.
Ngamanye amaxesha xa ndibandakanyeke ngokunzulu emsebenzini wam, intombi yam iya kuthi ga kwikhompyuter emva kwam (iinyawo ezi-6 kude) kwaye IM mna… “Molo Tata! lol ”(una13). Ndihlala ndijikajika kwaye ndiqala ukuhleka… oko kuthetha ukuba bendikwiikhompyuter ixesha elaneleyo kwaye kufuneka ndichithe ixesha elithile kude nokujonga. Ngombulelo, uya kuzijula ​​kwisitulo sam kwaye akhuphe i-heck kum de ndiye kude nelaptop. Ndinethamsanqa ukuba nomntu okhathalayo ngokwaneleyo ngam ukuba enze oko.
Kwi-2000, a inkawu ilawula ingalo nge-Intanethi. Ngoku kukho nesiqalo, esibizwa amanani, Esebenza ukuthelekisa ubukrelekrele bobugcisa kunye nobukrelekrele bomntu.
Oku kuqala ukukhumbuza iiTelosians kwisiqendu sokuqala seStar Trek. Babengama-dudes amabi aneentloko ezinkulu ezityebileyo ezigcina abantu bebanjwa ngokwenza izinto ezingacacanga kwiintloko zabo. (Ndixelele ukuba uyayikhumbula loo nto episode, "Ikheyiji". Kwakungaphambi kweShatner! Owona mqhubi ubiza kakhulu kwi-NBC).
Sasidla ngokuqhagamshelwa kuphela emsebenzini, emva koko ekhaya, ngoku kwiiselfowuni zethu… ingaba ingqondo ilandelayo ngenene? Ngaba siya kuba nalo naluphi na uhlobo lobomi ngaphandle kwe-Intanethi? Kuya kuba yinto eyoyikisayo, akunjalo?
Ewe uqinisekile, ukuba sinokunxibelelana ngengqondo kwi-Intanethi, cinga nje ukuba singabhala ngokukhawuleza kangakanani kwaye sisebenzise ikhowudi. Ndingakha ifama yonjiniyela ngombhobho wekofu kunye nepitsa ecoliweyo ngeetyhubhu zesisu kunye nokwakha Inqaku elinye ngoBomi abahlanu. (Kwenye indawo phakathi koBomi bokuQala kunye neSibini).
Ayivakali intlalontle kum, nokuba. Ndidinga ukuphuma ngakumbi.
I-PS: Ucinga ukuba yintoni iakhawunti yeBongo 'yeNet eza kusebenza?
Thatha loo iPhone!
Juni 19, 2007 ngo-9: 36 PM
Ngaba eli lixesha elibi lokukuxelela ukuba uphoswe yikonsathi ENKULU e-The Lawn ngoLwesihlanu ebusuku, okanye lixesha elifanelekileyo lokukukhumbuza ukuba ubukho bakho buye baphoswa? Ithamsanqa ngokukhulula kwakho iiplagi ngamaxesha athile. Indincedile kakhulu, kakhulu. Ndinokuba nolwazi oluncinci kodwa ngokuqinisekileyo ndiziva ndinxibelelene ngakumbi nabantu.
Juni 19, 2007 ngo-10: 00 PM
Ukuphoswa yikonsathi ngolweSihlanu ngokuqinisekileyo kuphefumlele esi sithuba, Julie! 🙂
Juni 20, 2007 ngo-3: 40 PM
Yicime ifowuni yakho ngamaxesha athile.
Cima i-imeyile ngamaxesha athile.
Hamba uye kubona iintaba namahlathi nolwandle!
Akukho mfuneko yoBomi beSibini, hayi, thx!
Ndineteknoloji eyaneleyo kum ubomi bokuqala ngoku! 🙂